SIDA LOO DOORTO SPRAYER BEERTA DALKA: SHURUUDAHA XULASHADA IYO MOODOOYINKA CAANKA AH - MISHIINADA GAARKA AH
Noocyada aasaasiga ah iyo xeerarka xulashada beerista beerta
Sida aad ogtahay, dhir kasta wuxuu u baahan yahay daryeel, oo ay ku jiraan daaweyn tayo leh oo ka dhan ah cayayaanka. Qalabka ugu fudud ee lagu fuliyo nidaamyada noocaas ah - spray. Iyagu ma awoodaan oo keliya geeddi-socodka cayayaanka, laakiin sidoo kale waxay sameeyaan dharka xididka. Iyada oo gacan laga helayo faleebo ayaa suurtogal ah in la isticmaalo nooc kasta oo dareere ah oo leh filin dhuuban iyo labis.
Kombiyutubka ballanta ee beerta
Waxaa habboon in la ogaado in dhammaan kumbiyuutarrada ay isku mid yihiin. Farqiga ugu wayni waa mugga taangiga. Waxay ku kala duwanaan kartaa 2 ilaa 80 litir.
Kombiyuutarrada taangiyada yaryar waxay ku habboon yihiin shaqooyin yar yar. Waxaa badanaa loo isticmaalaa shaqooyinka lagu koriyo. Miisaanka qalabkan waa 2-3 litir.
Wixii ka shaqeynta beerta beerta ama beerta, waxaa fiican in la doorto faleebo leh taangiyo waaweyn. Iyada oo ku xiran mugga sawirka, waxaad dooran kartaa model leh taangiga taangiga 5 ilaa 80 litir. Kombiyuutarrada noocan oo kale ah waa gundhin iyo wheeled. Nooca ugu horeeya waa mid isdhaafsan oo mobile ah.
Waxay ku habboon tahay in isaga la shaqeeyo dherer ahaan iyada oo aan u adeegsaneynin qaabab dheeraad ah (tusaale ahaan, jaranjarada). Nooca labaad wuxuu leeyahay hanti aad u wayn, kaas oo ay suurtagal tahay in la sameeyo meel ballaadhan oo aan buuxin dheellitirka.
Mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee daryeelka sariiraha beerta, beerta iyo cawska - ka hortagga iyo ka saarista caws. Baro wax badan oo ku saabsan kooxaha noolaha ee cagaaran, iyo sidoo kale sida loola macaamili karo daaweynta dadweynaha, qalabka gaarka ah iyo geedislaha.
Noocyada ugu caansan ee buufinta beerta ee nooca shaqada iyo astaamaha
Marka la eego noocyada buufinta dhismaha waxaa loo qaybiyaa:
Video: dib u eegis lagu sameeyo buufinta beerta
Guryaha manaafacaadka leh kaydka ilaa 2 litir, qaybta isku dhafan waxay ku taalaa madaxa. Dareerka ayaa lagu buufiyaa adigoo riixaya kabaalka. Qalabka noocan oo kale ah waxaa lagu iibin karaa ama aan haysanin.
Waa muhiim! Hubka rusheeyaa waa wax aan fiicneyn oo lagu shaqeynayo goobo waaweyn, maadaama ay la shaqaynayso qalab noocan oo kale ah waxay qaadan doontaa waqti badan.
Waxay kuhaboon yihiin dhirta si toos ah loogu koray guriga ama aqalka, iyo sidoo kale sariiraha ubaxa yaryar.
Noocyada nabarrada ma laha haan gaar ah. Isticmaal bamka gacanta, dareeraha wuxuu galaa gudaha gudaha, iyo markaad taabatid gacantaada waxaa lagu buufinayaa gudaha dibedda. Hannaanku wuxuu la mid yahay mabda'a bamka baaskiilka.
Faleebo noocan oo kale ah ayaa ku haboon in lagu shaqeeyo goobaha waaweyn: beerta ubaxa, beerta khudradda, beerta, iwm.
Kombiyuutarrada mashiinka ayaa ku shaqeeya mabda'a bukaanka bamgareynta biyaha. Waxay leeyihiin bamka pneumatic xoog leh (sida caadiga ah ee daboolka taangiga). Gacanta isbeddeladu waxay ku taallaa bartamaha dhismaha, bararkuna wuxuu soconayaa ilaa 3 m.
Isticmaalka bamka ee taangiga wuxuu abuuraa cadaadiska lagama maarmaanka u ah buufinta. Baahida loo qabo in lagu kala beddelo waxaa lagu go'aamiyaa yareynaya xoojinta buufinta. Kombiyuutarradaas waxaa lagu soo bandhigaa qaabab yaryar oo gacanta loo isticmaalo (sida dhalada buufinta), jilbaha waaweyn iyo aaladaha kale. Marka mugga taangigu uu yahay ilaa 2 litir, dhirta gudaha waxaa lagu daaweeyaa falejo, laga bilaabo 3 ilaa 12 litir - goobo ilaa 30 hektar ilaa 20 litir - goobo ilaa 50 hektar ah.
Cawska beerta waxaa lagu beeray ugu horreyn qurux, laakiin haddii aad cawska ku dabbaasho beerta, shaqada beerta waa la fududeeyaa. Waxaan kugula talinaynaa inaad ka akhridid ​​sida loo abuuro cawska, nooca cawska ee jira, sida loo daryeelo, kuwaas oo ah sida biyaha iyo mulch cawska leh cawska cawska, iyo sidoo kale nooca cawska ah ee lagu dooranayo - koronto ama batrool.
Sprayers ayaa sidoo kale leh bamka, laakiin waxay ku taalaa xagga hoose ee dhismaha, iyo gacanta ayaa ku taal dhinaca bidixda. Marka la eego qaababka, moodooyinka qaar, xakamaynta waxaa loo rogi karaa bidix illaa midig. Taasi waa sababta ay ufilan tahay ficil-celinta bamka, maadama bacda boodhka la samayn karo iyada oo aan loo baahneyn dheellitiro dheeraad ah (ka saar garbaha, bamgareynta iyo dib u dhig). Miisaanka kaydka ee aaladaha noocan oo kale ah waxay ku kala duwanaan karaan 12 ilaa 20 litir.
Nalalka Badeecada - Badeecadda saaran taayirrada. Way ka sahlan yihiin mashiinka dhejiska, maaddaama hawsha dheellitirka lagu sameeyo batari, iyo duuliyaha buufin badan ayaa ka awood badan. Bateriga waxaa lagu rakibay guryaha guluubka. Bixinta bateriga ayaa soconaya illaa 6 saacadood oo ah hawlgal joogto ah.
Ma taqaanaa? Burburkii ugu horeeyay ee caalamka ee uu abuuray G. Plante 1859
Kiimikada xashiishka ayaa sidoo kale badbaadin kara kiimikooyinka, maadaama ay hawsha kala-bixinta ku buufinayaan si ka badan. Maydhka taangiyada waxay ku kala duwan yihiin 15 illaa 20 litir (5-litir oo ah noocyo dhif ah).
Kiimikada shidaalka ee batroolka waxaa lagu qalabeeyaa baasiino 2-5 l / s oo leh awood taangiga 12-20 litir. Qalab noocan oo kale ah waxaa lagu daaweyn karaa aag ah ilaa 1 Ha. Duulimaadyada diyaaraduhu waa 15 m, waana 7 m sare, faleebada batroolku waxay kuu oggolaaneysaa inaad hirgeliso ilaa 5 hektar oo dhul ah maalintii. Si ka duwan noocyada kale ee gaasku waxay leeyihiin barar qaro weyn, oo cadaadisku ka yimaadaa dareeraha qaabka qiiqa wanaagsan ama aerosol weyn. Inkastoo qiimaha sarreysa, haddana looma dhicin caanaha beeralayda.
Waxa la eegayo marka laga reebo nooca
Xulashada daaqa ee aad ujirta, dareenka kuguma aha oo kaliya qiimaha, laakiin sidoo kale in:
Muddada geedi socodka joogtada ah ee dhirta tooska ah waxay ku xiran tahay awoodda taangiga qolka: meesha weyn, mugga taangiga waa in uu ahaadaa. Si loo dhiriyo geedaha, waxaad u baahan tahay faleebo leh kaydka 2-10 litir, duurka - 1 litir, dalagyada qudaarta iyo beeraha kale - 1-2 litir 10 mitir oo laba jibbaaran.
Habka Gaadiidka iyo Miisaanka
Marka la eego nooca buufinta qaadashada waxaa loo qaybiyaa:
Kombiyuutarrada gacantaSida caadiga ah, miisaan yar iyo mugga (ilaa 2.5 litir). Kuwaas waxaa ka mid ah qoriga buufinta iyo kuwa buufinta mishiinka. Unugyada garabka waxay leeyihiin hal garab garabka.
Dabcan, noocan ah qaadista gacmaha, laakiin miisaanka qaabdhismeedka oo dhan waa mid aan si siman loogu qaybin jirka jirka, taas oo aan si weyn u fududeynin shaqada. Kuwaas waxaa ka mid ah noocyo taangiyo ilaa 12 litir.
Qalabka Backpack xirtid dhabarkaaga sida boorsada dalxiiska. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad miisaanka u rogto miisaanka si siman jidhka oo aad gacmahaaga u siiso shaqo. Kuwaas waxaa ka mid ah kabaalka gacanta, batroolka, batteriga iyo bamka.
Hababka muraayadda waxay u adeegaan goobaha waaweyn. Way yar yahiin mobile, laakiin waxay leeyihiin mugga ballaaran ee taangiyada (badanaa gaaska iyo batteriga).
Sidoo kale meelo badan oo muhiim ah oo ku saabsan daryeelka ayaa goobta ka jaraya cawska. Wax ka baro liiska darajada 5 kuwa ugu fiican ee guriga iyo mashiinka xirfadlayaasha ah, iyo sidoo kale akhrinta sida loo doorto gaas gaasku ugu fiican yahay inaad dooratid gurigaaga.
Mucaarad kala duwan
Nooc buufirku ku xiranyahay awoodda cutubka. Weyn ayaa weyn, meesha weyn ee la dabooli karo, oo ku hartay meel isku mid ah. Moodooyinka iyo garabka garabyada, sawirkani waa 1-2 m, iyo dhabarka dhabarka iyo mootooyinka - 8-12 m.
Masaafada udubdhexaadka ayaa saameysa qiimaha badeecada, laakiin ha u iibsan faleereha iyada oo aan imtixaan hore la qaadin.
Fikradda ah in barta weyn, si fiican ma aha had iyo jeer run, gaar ahaan haddii dhererkiisu aan la hagaajin karin. Qaybaha leh 1.5-mitir mitir waxay ku haboon tahay in lagu buufiyo geedaha, halka 70 cm ay ku filan tahay dalagyada khudradda. By habka, baararka waa caadi iyo telescopic, oo leh dhamaadka toosan iyo curved. Xulashada ugu guuleysiga badani waa ulo telescopic, maaddaama dhererkeedu si fudud loo habayn karo. Waa in laga sameeyaa bir ah. Way fiicantahay haddii sheyga la qalabeeynaayo qalabka isbeddelka ah.
Aaladda amniga waxaa loo isticmaalaa in laga saaro socodka hawada ka baxsan mashiinka buufinta. Tani waa lagama maarmaan si looga hortago dillaacda weelka.
Waa muhiim! U hubso inaad hubiso adeegga ku xirnaanta valent Safety ka hor intaadan iibsan.
Soo saaraha iyo qiimaha
Sida aad ogtahay, heerka caan ah ee astaanta ayaa saameynaya sicirka alaabta. Sidaas darteed, Sadko (Slovenia) ayaa soo saarey sawirro badan oo ka jaban Gardena (Jarmalka).
Habka miisaaniyadu mar kasta ma aha mid ka hooseeya tayada muuqaalka tayada leh, laakiin waxay u baahan tahay daraasad taxaddar leh. Ka mid ah shirkadaha la isku halleyn karo ee cutubyada sida: Marolex, Beetle, Kwazar. Shirkadaha caanka ah ee caanka ah iyo kan ugu qaalisan: Solo, Shtil. Marolex brand sprayers beerta Kombiyuutarrada nooca batroolka ayaa si fiican u matalaya magaca Makita iyo Solo.oo qiimahoodu ka badan yahay 18 kun oo raqiis ah. Noocyada Cheaper - Raaxo, Sfera, Palisad (3-7 kun oo doolar).
Waxaa ka mid ah buufinta baatroolka waa in ay doorbidaan noocyada Echo, Shtil, Solo, Efco iyo Oleo-Mac. Haddii aad u baahato inaad dooratid ikhtiyaarrada raqiisan, noocyada Champion-yada iyo Cagaarka Cagaaran waa kuwo caan ah (qiimaha ilaa 12 kun oo doolar).
Moodooyinka ugu caansan ee buufiyeyaasha beerta
Xilligan, suuqyada qalabka beerta waa mid kala duwan. Magacyada ugu caansan waa Kwazar iyo Marolex.maadaama qiimaha moodyadani ay xaq u leeyihiin tayada sare. Mastaradda xayawaanka ee Kwazaraka Intaa waxaa dheer, shirkadaha tayada waa Hozelock, Solo, Gardena, Efco, Valpadana iyo Oleo-Mac.. Dhibaatada ugu weyn waa tartanka caanka ah ee Ruushka (doorashada miisaaniyadda).
Waxaad faa'iido u lahaan doontaa inaad barato sida loo daryeelo beerta guga iyo sida loo doorto boorsada beerta.
Beetle OP-205 - unugga mashiinka gacanta ee leh qoorta fiilaha iyo baaluq. Volume - 1.5 litir. Qiimaha - 500 rubir. Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay si xun u falcelinayaan hawlgalka ilaysiga.
Sadko SPR-12 - Nooca dhirta caanaha ku habboon ee ku shaqeeya beeraha, sariiraha ubaxa iyo koriyo. Volume - 12 litir. Qiimaha - 1000 rr.
Forte CL-16A - faleebada batroolka leh nashqada ergonomic iyo miisaanka yar. Saacadaha furan - 4 saacadood Qalabka - 16 litir. Qiimaha - 2000 RUB.
Forte 3WF-3 - faleebo mashiinka leh nidaam ka hortag ah oo ka hortag ah. Awooda - 3 hp Volume - 14 litir. Qiimaha - 6000 Rug.
Beetle OP-207 - mashiinka garabka siigada leh awooda lagu xakameeyo gacanta bamka. Volume - 5 litir. Qiimaha - 700 Rug.
Gardena Rug 814 - mashiinka miisaanka culus oo leh mashiinka fudud ee dhismaha iyo nadaafad-dhafan oo dhejiya. Volume - 1.25 litir. Qiimaha - 1200 rubi.
Gloria Hooyga 100 - abuuritaanka shirkadda Jarmalka. Unugga wuxuu leeyahay xariijimo hufan oo muuqaal ah iyo fur furan oo weyn. Naqshadeynta faleebada waxay hubisaa in maaddada laysku daro ee dareeraha. Volume - 1 l. Qiimaha - 900 Rug.
Marolex Professional - faleebo nooca mashiinka ah oo leh nidaam ka hortag ah. Waxaa lagu gartaa iska-caabbinta sarreeya iyo joogitaanka boorsada budada. Volume - 9 litir. Qiimaha - 2000 RUB.
Marolex Hobby - Foornada pompovy ee culeys yar. Waxay leedahay naqshad adag iyo bamka sare ee waxqabadka. Volume - 5 litir. Qiimaha - 1400 rubir.
Kaliya 433 H - mashiinka mashiinka mashiinka Honda. Kani waa nooc ka mid ah shandadaha xirfadlaha ah oo leh ulo telescopic ah. Volume - 20 litir. Qiimaha - 30,000 rubi.
Hozelock Killaspray Plus - faleebo jajab ah leh ulo telescopic ah. Nidaamka naqshadeynta iyo kor u qaadista adkeysiga mashiinka iyada oo loo marayo isticmaalka qaybaha biraha waxay gacan ka geystaan ​​shaqada hawlgalka. Volume - 7 litir. Qiimaha - 4500 rubir.
Marolex Titan 20 - Foorno khafiif ah oo leh haan adag oo 20 litir ah. Waxaa ka samaysan qalab aad u sarreeya oo lagu qalabeeyay barxadda telescopic. Qiimaha - 4000 roog.
Oleo-Mac SP 126 - ku buufin leh mashiinka gaaska dabiiciga ah, kaas oo ku qalabaysan nidaamyada "Podsos" iyo "Lift Starter". Iyada oo, waxaad la xidhiidhi kartaa aag weyn oo beerto. Volume - 25 litir. Qiimaha - 30,000 rubi.
Ma taqaanaa? In Japan, beertay si xoog leh loola dhaqmo leh cayayaanka. 1 hektar oo ah 47 kg oo ah walaxda firfircoon ee firfircoon, halka Russia - 100 g.
Kiimikada shaki la'aan ayaa si wayn u fududeynaya daryeelka dhirta. Iyaga caawimadooda, dalagyada waxaa lagu daaweeyaa kiimikooyinka ka soo horjeeda cayayaanka, Bacriminta ayaa lagu dabaqaa xitaa waraabinta ayaa la sameeyaa. Marka aad soo iibsanaysid cutub noocan oo kale ah isticmaalka guriga, qiyaas shaqada aagga iyo go'aaminta mugga saxda ah ee taangiga.
Xasuuso in qalabku ay tahay in la xidho, sidaas daraadeed waa inay noqotaa mid raaxo leh. Xoogga saar qiimaha kaliya. Dhererka rodooska, awoodda mishiin, masaafo buufin, joogitaanka nuucyada dheeraad ah iyo valve amniga - wax kasta oo faahfaahin ah.
Warcelinta ka timid dadka isticmaala shabakada ku saabsan buufinta beerta
Sannadkan waxay go'aansadeen in ay ka soo iibsadaan kaaliyaha dalka si ay u hirgeliyaan dhirta oo dhan noocyada cayayaanka. Dukumiintiyadu waxay leeyihiin noocyo badan oo noocyada noocan ah ee wax soo saarka ah, welina dareenkeyga ayaa soo jiitay tijaabo aad u xiiso badan. Tani dabcan waa dabayl beerta "BISHA". Waxyaabaha ugu horreeya ee isha ku haya waa isha, taas oo aan kaliya ku qancin in ay tahay midabka dhalaalaya, waxaa si cad loogu arki karaa asalka cagaaran ee beerta dacha. Waxaan iibineynaa qalabkan si aad u sheegto, baakad hor leh (polyetylen). Hore waxaan raaligelinayaa qalabka sawir-qaadaha muddo dheer ku jiray shaqada waxaana laga yaabaa inuu ku jiro dareeraha shaqada.
Mabda'a hawlgalka ee faleebada waa mid fudud. Marka hore waxaad u baahantahay inaad daboolka daboolka ku dul xirto oo kor u qaad bamka.
Ka dibna ku shub dheecaanka shaqada ee luqunta sare, adkee bamka. Isticmaal si aad u abuurto cadaadiska taangiga (kaliya bamka bamka) iyo markaad riixdo kabaalka ku yaala ulaha leh faleereer si aad u hesho shaqo. Waxaan naftayda iibsaday 5 litir, dabcan, bacrimin kasta waxaa ku dhowaadba lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah. Laakiin naqshadkan qalabkan ma aha mid si aad u habboon loo sameeyo garabka garabka iyo haddii uu yahay mug weyn, waxay saameyn doontaa miisaanka garabka.
Nooca baasaboorka ee qalabkan. Dhinaca dhinaca dambe waa buug farsamo aad u faahfaahsan. Waan ka xumahay in aan sameeyo sawir. Iyadoo la soo koobay natiijooyinka spray - waa lagama maarmaan in la qaato.
Qof walba wac Maaddaama aan haysto aagga banaan-baxa, ka dib markii ay jabeen sprayer sprayer waxaan go'aansaday in aan wax iibsado wax badan oo lagu kalsoonaan karo. Si aad u ammaan ah soo saaraha soo saaraha nooca "ZUK" ayaa sidaas go'aansaday inuu isaga dhexdiisa ka raadiyo. U qadan "maxkamadaynta" qaab muuqaal ah 2 litir oo OP-230 ah. Waxay ka samaysay balaastiig tayo sare leh taabashada, oo ay ku jiraan silsilad shaqeynaya leh piston.
Marka hawo la boodo, ma jirto meel ay wax u gudbiso, maaddaama daboolku leeyahay xanjo daboolaya. Waxaa jira tilmaamo faahfaahsan oo loo isticmaalo.
Way ku habboon tahay in gacanta lagu hayo, badhanka waa jilicsan, diyaaraduhu ma aha mid aad u xoog badan, laakiin buufinku waa mid fiican, oo leh muraayad. Ha u dhicin meel fog fog, sida la filayo, laga yaabo in aan ka badnayn 1 mitir.
Diyaarsanaanta diyaaradda muddo dheer, hal bamgarad ayaa ku filan taangiyada oo dhan. Waxa uu ku dhajiyay madaxa buufinta, mana fahmin haddii ay xakamaynayso buufinta iyo in kale. Sidaa darteed, waa adag tahay ku habboon tahay in la buufiyo baradho, laakiin si ay u shaqeeyaan aqalka dhirta lagu koriyo ama lagu rusheeyo ubaxyada guriga oo saxda ah. Mabda 'ahaan, waad shaqeyn kartaa, hawlahoodu waafaqsan yihiin.
Mashiinka aadka u wanaagsan ee shirkada Jarmalka (SOLO +) way ka fudud yihiin quasarov. Waxay ku habboon tahay in ay qaadato 5 litir, sababtoo ah kiimikada ayaa inta badan lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah, wax macno ah ma qaadaneyso 8 litir oo culeyskeedu aad u sarreeyo (waa wali 10l oo lagu shubo laba jeer ...). Way ka fiican tahay inaad iibsato xayiraado dheer ah (kuwa telescopic waa kuwo ku habboon ...)
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Mishiinada gaarka ah 2019